Mp3 ဖိုင်များ တိုက်ရိုက်နားဆင်နိုင်ရန် - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် » ..:: ကြေညာချက်များ ::.. » မသိမဖြစ်
Mp3 ဖိုင်များ တိုက်ရိုက်နားဆင်နိုင်ရန်
မသိမဖြစ် ဖိုရမ်က အသင်းသားတွေ ဖိုရမ်မှာ လည်ပတ်ရတာ ၊ ဖတ်ရှုရတာ ၊ ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ရတာ စသဖြင့်ပေါ့ အားလုံးအဆင်ပြေအောင် မသိမဖြစ် လိုအပ်တာလေးတွေကို ဒီမှာ ထည့်ပေးထားပါတယ်။
23-05-2011, 12:56 AM
ပို့စ် 3,056 ခုအတွက် 13,948 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
MP3 ဖိုင်များ တိုက်ရိုက်နားဆင်ဖို့အတွက် Text Editor မှာ MP3 Player icon လေး ထည့်ပေးထားပါတယ်။
ကိုယ်တင်ချင်တဲ့ MP3 ဖိုင်ကို file hosting တစ်ခုခုမှာ အရင်တင်ရပါမယ်။
file extension .mp3 နဲ့အဆုံးသတ်တဲ့ hotlink ဖြစ်ရပါမယ်။
www.kiwi6.com , www.fileden.com တို့မှာ hotlink ရပါတယ်။ တခြား site တွေလည်း ရှိပါလိမ့်မယ်။
လင့်ခ် ရလာပြီဆိုရင် Player ထဲထည့်ဖို့အတွက် Text Editor က ဂီတသင်္ကေတပုံလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။
MP3 code နှစ်ခု ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
MP3 code နှစ်ခုကြားမှာ လင့်ခ်ကိုထည့်ပါ။
သီချင်းခေါင်းစဉ်လေး ဘာလေးရေးပြီး “ဆွေးနွေးချက်ကိုတင်မည်” ပေါ့။
ဒီလိုလေး မြင်ရပါမယ်။ ညာဘက်က play button လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။
စတင် နားဆင်နိုင်ပါပြီ။ ဘယ်ဘက်က volume button ကို drag လုပ်ပြီး အသံအတိုး၊ အကျယ် လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ညာဘက်က pause button ပါ။ download ချပြီးနားဆင်ချင်ရင်တော့ “download” ကိုနှိပ်ပါ။
အောက်မှာ နမူနာ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
မီးအိမ်ငယ် - Toxic
ရုပ်ရှင် ၊ ဂီတ ကဏ္ဍအောက်မှာ ကိုယ်တိုင် ရေး/ဆို သီချင်းများ တင်ပေးကြတဲ့ မောင်နှမများ အသုံးတည့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒေါင်းပြီး နားထောင်ရမှာ ပျင်းသူများအတွက် အလွယ်တကူနှိပ်ပြီး နားဒုက္ခခံရတာပေါ့။
Last edited by tu tu; 13-06-2012 at 02:23 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 54 ဦးတို့မှ tu tu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုပျင်း, ချစ်သမီး, ချယ်ရီမင်း, တာတာ, ဖယောင်း, မိုးတိန်, မျိုးဟန်ထက်, ယွန်းယွန်း, ဝင်းကျော်ဦး, ဝင်းအောင်, ဟန်မိုးလွင်, ဦးလေးကြီး, ခေါက်ရောင်းသား, မေမင်းဆက်(ပုသိမ်မြေ), မေဦးမွန်, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, အောင်လံလေး, ငြိမ်းချမ်း, မြင့်မိုရ်, ငြိမ်းချမ်း(nyeinc8an), နိုးတူး, amaung344, apri, arkaraung, Aung Aung, AZM, bagothar85, bonge, bunny, futurestar, g00gle, hellboy, htoo war, htun30, kaung kin lu, ko lin, kyaukphyu, kyawminkhoung, KznT, lu soe, Lwin Thu, MilkyWay, minthike, mjkomg012@gmail.com, mogur, pannuko, phoetharlay, phyomyintthein, winkyway, Ye Aung, yelinoo, zin min aung, zo
tu tu ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Visit tu tu's homepage!
Find More Posts by tu tu
29-05-2011, 12:46 AM
ပြန်စာ - Mp3 ဖိုင်များ တိုက်ရိုက်နားဆင်နို)
အပေါ်ကပို့စ်မှာပြောခဲ့တာက ပို့စ်တွေမှာ သီချင်း တစ်ပုဒ်ချင်းစီကို mp3 player နဲ့အတူထည့်သွင်းဖို့ပါ။
ဒီတစ်ခါတော့ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် သီချင်းလေးတွေကို Playlist တစ်ခု ဖန်တီးပြီး ကိုယ်ရေးဖိုင် (profile) မှာ mp3 player နဲ့အတူ ထည့်သွင်းကြရအောင်...
Playlist ဖန်တီးဖို့အတွက် အရင်ဆုံး http://www.mixpod.com မှာ account ဖောက်ရပါမယ်။
account လုပ်တာတော့ မပြောတော့ဘူးနော်။ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့။
account လုပ် login ၀င်ပြီးတာနဲ့ playlist ဖန်တီးဖို့အတွက် အပေါ် menu bar က Create Playlist ကိုနှိပ်ပါ။
ပထမဆုံး Tab က Add Music ပါ။ သီချင်းတွေ ထည့်ပါမယ်။
အဲဒီမှာ (၂)မျိုး ရှိပါတယ်။ တစ်ခုက သူ့ရဲ့ search function ကနေ ရှာပေးတဲ့သီချင်းတွေကို ကိုယ့် playlist ထဲ ထည့်တာပါ။
နောက်တစ်ခုက ကိုယ့်ဘာသာ upload တင်ထားတဲ့ hotlink URL ကို ထည့်တာပါ။
ပထမနည်းအတိုင်း ထည့်မယ်ဆိုရင် search box မှာ သီချင်းအမည် (or) တေးသံရှင်အမည် တစ်ခုခု ရိုက်ရှာပါ။
ရှာလို့တွေ့တာတွေကို ကြိုက်၊ မကြိုက် play ပြီး နားထောင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ကြိုက်ပြီဆိုရင် add button နှိပ်ပြီး playlist ထဲ ထည့်လိုက်ပေါ့။
ရှာတွေ့တာတွေထဲမှာ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် မပါဘူးဆိုရင်တော့ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်သီချင်းတွေကို file hosting တစ်ခုခုမှာတင်ရပါမယ်။
အပေါ်ကပို့စ်မှာပြောထားသလိုပဲ hotlink ဖြစ်ရပါမယ်။
အဲဒီလင့်ခ်ကို ထည့်ဖို့အတွက် Add URL ကိုနှိပ်ပါ။
upload တင်ပြီးရခဲ့တဲ့လင့်ခ်၊ သီချင်းအမည်၊ တေးသံရှင် ဖြည့်ပြီး Add Track ပေါ့။
ကိုယ်ထည့်ထားတဲ့ သီချင်းတွေအားလုံး ညဘက်က Tracks အောက်မှာ မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
စိတ်ကြိုက်ထည့်သွင်းပြီဆိုရင် ဒုတိယ Tab က Customize ပါ။
အဲဒီမှာ Skin, Colors & Styles, Setting (၃)မျိုး ပါပါတယ်။
Skin က player ပုံစံ ရွေးဖို့ပါ။ ဘယ်ပုံစံပဲဖြစ်ဖြစ် ဖိုရမ်မှာက အဲဒီပုံစံတွေ ပေါ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ playlist ပဲပေါ်မှာပါ။
တခြား website, blog တွေမှာ တင်ဖို့ဆိုရင်တော့ နှစ်သက်ရာ ပုံစံလေးရွေးပေါ့။
နောက်တစ်ခုက color ရွေးဖို့ပါ။ အဲဒီမှာ တစ်ခါထဲရွေးချင်လည်း ရွေးခဲ့ပါ။ မရွေးချင်ရင်လည်း ဖိုရမ်မှာ တင်တဲ့အခါ ပြန်ရွေးလို့ ရပါတယ်။
နောက်ဆုံး တစ်ခုက setting ပါ။ အဲဒီမှာ default က Autoplay မှာ No ပါ။ play button ကိုနှိပ်မှ သီချင်းသံကြား၇ပါမယ်။
တကယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ရေးဖိုင်ကို ၀င်လိုက်တာနဲ့ သီချင်းသံကြားစေချင်ရင် Autoplay play မှာ Yes ပေါ့။
ဒါပေမဲ့ တခါတရံမှာ အဲဒါကြီးက စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်စေပါတယ်။ ၀င်လိုက်တိုင်း ကိုယ်မကြိုက်တဲ့သီချင်းက ထထအော်နေတာကိုး။
အရောင်၊ setting တွေအားလုံး စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ Save Playlist ကိုနှိပ် ခေါင်းစဉ်ပေးပြီး save လိုက်ပေါ့။
အဲဒီမှာ code ယူမလား ဘာညာ မေးပါလိမ့်မယ်။ တခြား website, blog တွေမှာ တင်ဖို့ဆိုရင် click here ကိုနှိပ်ပြီး code ယူနိုင်ပါတယ်။
ဖိုရမ်မှာတင်ဖို့အတွက်တော့ အဲဒီ code တွေယူစရာမလိုတဲ့အတွက် close လိုက်ရုံပါပဲ။
ကိုယ်ဖန်တီးထားတဲ့ Playlist ကိုကြည့်ဖို့အတွက် အပေါ် menu bar က My Playlist ကိုနှိပ်ပါ။
အဲဒီမှာ Playlist ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
Playlist ရဲ့ လင့်ခ်ကိုရပါပြီ။ Browser ရဲ့ address bar ကလင့်ခ်မှာ ID ရှိပါတယ် အဲဒါကို copy ကူးယူခဲ့ပါ။
ဖိုရမ်မှာတင်ဖို့အတွက် အဲဒီ ID တစ်ခုပဲ လိုအပ်ပါတယ်။
ဖိုရမ်မှာ playlist ကိုတင်ဖို့အတွက် ပြင်ဆင်ရန်>>အသေးစိတ်ပြင်ဆင်ရန်>>အခြား ဖြည့်စွက်ရန် အချက်များ သို့သွားပါ။
MixPod playlist ရဲ့ ID ဆိုတာ ခုနက copy ကူးခဲ့တဲ့ ID ပါ။
background colour က playlist ရဲ့နောက်ခံအရောင်ပါ။
highlight colour က current play track ကို highlight လုပ်ပေးမယ့်အရောင်ဖြစ်ပြီး text colour က သီချင်းအမည်တွေမှာ ပေါ်မယ့်အရောင်ပါ။
colour code တွေ မသိဘူးဆိုရင် ဒီမှာ သွားကြည့်ပါ။
Mixpod မှာကတည်းက colour တွေ စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ အဲဒါတွေ ဖြည့်စရာ မလိုပါဘူး။
အားလုံးဖြည့်ပြီးရင် “ပြင်တာတွေသိမ်းမယ်” ပေါ့။
ကိုယ့် profile မှာ ဒီလိုလေး မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
အားလုံးပဲ သံစဉ်များနဲ့အတူ ဖိုရမ်မှာလည်ပတ်ရင်း ပျော်ရွှင်ကြပါစေ...။
Last edited by tu tu; 29-05-2011 at 01:37 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 39 ဦးတို့မှ tu tu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုမိန်နွယ်, ချစ်သမီး, ချယ်ရီမင်း, စနိုးလေး, မင်းအာကာကျော်, မိုးတိန်, မျိုးဟန်ထက်, ယွန်းယွန်း, ဝင်းကျော်ဦး, သက်တန့်, ဟန်မိုးလွင်, ဦးလေးကြီး, ခေါက်ရောင်းသား, မေဦးမွန်, မောင်ပေါ်ဦး, မြန်အောင်သား, arkaraung, AZM, bagothar85, bonge, bunny, g00gle, hellboy, htun30, kaung kin lu, ko lin, kyawminkhoung, KznT, may.yinhkwin, mgwinhlaing, MilkyWay, minthike, mogur, pannuko, phyomyintthein, smlat88, Ye Aung, yelinoo, zo
29-07-2011, 03:13 PM
ပို့စ် 15 ခုအတွက် 37 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
tu tu ပြောတဲ့အတိုင်းတင်ကြည့်လိုက်ပါတယ်...။။
MixPod အကောင့်ဖောက်ထားတာကြာပါပြီ.. ဒီလိုသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာမသိခဲ့ဘူး..။။
အောက်ပါအသင်းဝင် 13 ဦးတို့မှ may.yinhkwin အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ချယ်ရီမင်း, မိုးတိန်, arkaraung, bonge, g00gle, htun30, kaung kin lu, minthike, mjkomg012@gmail.com, pannuko, tu tu, yelinoo, zo
Find More Posts by may.yinhkwin
29-09-2011, 01:06 AM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Jul 2008
တည်နေရာ: the earth that GOD created.
ပို့စ် 1,053 ခုအတွက် 6,018 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျနေ်ာတို. အပေါ်က mixpod ကို အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ. ကိုယ်ပိုင်သီချင်း(ကိုယ်ကြိူက်တဲ့သီချင်း) တင်လို.မ၇တော့ပါဘူး။
add URL ဆိုတဲ့ funciton ကို ဖြုတ်လိုက်ပါပြီ။
ဒါကြောင့် search music မှာပဲ ရှာလို.၇ပါတော့တယ်။
ကျနေ်ာ အစမ်းအနေနဲ. ကိုလေးဖြူ (layphyu ဆိုပြီး ရှာတာ) အများကြီးတွေ.၇ပါတယ်။
ကျနေ်ာ့ကိုယ်ေ၇းဖိုင် မှာ အစမ်းလုပ်ထားပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 12 ဦးတို့မှ zo အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ချယ်ရီမင်း, စနိုးလေး, မိုးတိန်, မျိုးဟန်ထက်, arkaraung, bunny, g00gle, htun30, kaung kin lu, minthike, tu tu, yelinoo
Find More Posts by zo
29-09-2011, 10:35 AM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Dec 2010
ပို့စ် 1,345 ခုအတွက် 8,094 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Originally Posted by zo
ဒါကြောင့် search music မှာပဲ ရှာလို.၇ပါတော့တယ်။
ကျွန်တော့်ဆီမှာတော့ ရသေးပါတယ် ကို Zo... ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲတော့ မသိဘူး...တစ်ခြား အစ်ကို၊အစ်မတွေလည်း ကြည့်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာ...
အောက်ပါအသင်းဝင် 14 ဦးတို့မှ bagothar85 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ချယ်ရီမင်း, စနိုးလေး, မိုးတိန်, ဝင်းကျော်ဦး, arkaraung, g00gle, htun30, kaung kin lu, lokasara, mgwinhlaing, minthike, tu tu, yelinoo, zo
Find More Posts by bagothar85
29-09-2011, 10:40 AM
ကျွန်တော်လဲ ရပါသေးတယ်။ အကောက် အသစ်၊ အဟောင်းကွာလို.လားတော. မပြောတတ်ဘူး။
အောက်ပါအသင်းဝင် 12 ဦးတို့မှ g00gle အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ချယ်ရီမင်း, စနိုးလေး, မိုးတိန်, ဝင်းကျော်ဦး, arkaraung, bagothar85, htun30, kaung kin lu, minthike, tu tu, yelinoo, zo
29-09-2011, 12:00 PM
အဲဒီ mixpod playlist ပို့စ်ကို တင်တဲ့အချိန်တုန်းက လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်က လုပ်ထားတဲ့ အစ်မရဲ့ account နဲ့ စမ်းခဲ့တာပါ။ (account လုပ်တုန်းက အဲဒီ site က mixpod မဟုတ်သေးဘူး။ MyFlashFetish.com ပါ။)
အဲဒီ account မှာ Add URL ကရှိနေတော့။ account အသစ်တွေမှာ Add URL မပေါ်ဘူးဆိုတာ မသိခဲ့ဘူး။ နောက်မှ ချုပ်ကြီး သူ့ profile မှာ တင်တော့မှ Add URL မတွေ့ဘူးပြောလို့ အဲဒါကို သိရတာပါ။ အဲဒါနဲ့ account အသစ် ဖွင့်ကြည့်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ် မပေါ်ပါဘူး။ သူတို့ဖိုရမ်ထဲလည်း ၀င်ဖတ်ကြည့်ပါတယ်။ အဲလို အော်ထားကြတာတွေ တွေ့ပါတယ်။ အဲဒီက Admin ထင်တာပဲ bill ဆိုတဲ့တစ်ယောက်ဆီသွားကြည့်တော့ အဲဒီမှာ တစ်ယောက်က သူ့ account မှာ Add URL မပေါ်တော့လို့ ပြန်ထည့်ပေးပါလို့ အော်ထားတာတွေ့တာနဲ့ သူ့လိုပဲ အော်ခဲ့လိုက်တယ်။ Contact ကနေလည်း စာပို့လိုက်တယ်။ အဲဒါကြောင့်လား ဘာကြောင့်မှန်း သေချာမသိပေမယ့် နောက်တစ်ပတ်လောက်အကြာ ပြန်ဝင်ကြည့်တော့ Add URL ရနေပါပြီ။
ပဲခူးဆားက သူ့ account မှာ မြင်ရတယ်ပြောလို့ account အဟောင်းလားလို့ မေးတော့ အစ်မပို့စ်တက်ပြီး နောက်နေ့ account ဖောက်တာလို့ ပြောပါတယ်။ အဲတော့ အစ်မအထင် account အသစ်အားလုံး အဲဒီ function မရတာတော့ မဟုတ်လောက်ဘူးထင်တာပဲ။ ရတဲ့သူ ရနေတာကိုး။ နောက်တစ်ခု ရှိသေးတယ် Auto play ရတဲ့သူရတယ်။ မရတဲ့သူ မရဘူး။ အဲဒါ မသေချာတာနဲ့ ဒီပို့စ်မှာ update မလုပ်လိုက်မိဘူး။
အဲတော့ သူတို့ profile မှာ သွားအော်ကြည့်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် စာပို့ကြည့်ပါ။ ရတော့လည်း အမြတ်ပေါ့နော်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 14 ဦးတို့မှ tu tu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ချယ်ရီမင်း, စနိုးလေး, တီဘွား, မိုးတိန်, ဝင်းကျော်ဦး, မြန်အောင်သား, arkaraung, bagothar85, g00gle, htun30, kaung kin lu, minthike, yelinoo, zo
29-10-2011, 11:07 PM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Oct 2010
ပို့စ် 22 ခုအတွက် 121 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွန်တော် ပထမ လုပ်တာမရဘူးဗျ...အဲဒါနဲ့ ပြန်ထွက်ပြီး ပြန်ထွက်ပြီးဝင်တာ ရတယ်ခင်ဗျ.
အခုမှ အသစ်လုပ်တာပါ..ကျွန်တော့် အကောင့်က....
ှုှုှုှုှု[LEFT][SIZE="5"]ကို့ အတ္တ ထက် မင်းကို ပိုချစ်တယ်[/SIZE][/LEFT]
အောက်ပါအသင်းဝင် 11 ဦးတို့မှ ဝင်းကျော်ဦး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ချယ်ရီမင်း, စနိုးလေး, ခေါက်ရောင်းသား, arkaraung, g00gle, htun30, kaung kin lu, smlat88, tu tu, yelinoo, zo
Find More Posts by ဝင်းကျော်ဦး
29-08-2012, 03:52 PM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Aug 2012
ပို့စ် 49 ခုအတွက် 154 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကိုယ်ဖြစ်ချင်သလို ဖြစ်မလာသေးတဲ့ အချိန်တွေရယ်...
ကိုယ်မျှော်လင့်တာ ဖြစ်လာပါ့မလားလို့ မျှော်နေရတဲ့ အချိန်တွေရယ်...
လူတစ်ယောက်ကို စောင့်နေရတဲ့ အချိန်တွေရယ်...
အဲဒီအချိန်တွေက ဘ၀မှာ ရင်မောရဆုံး အချိန်တွေပေါ့....
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ကျေးကျွန် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ကျေးကျွန်
06-12-2012, 08:44 AM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Jul 2009
ပို့စ် 1 ခုအတွက်2ဦးမှကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
MixPod is closed.
Wait, what the heck? We would love to keep MixPod running but we simply couldn't afford to keep the servers running. Stay tuned, we'll have some information on exporting your playlist information. In the mean time, you can show your support and check out the app below.
သီချင်း နားထောင်ချင်လို့ မဇ်စ်ပေါ့ ကိုဖွင့်တာ အကောင့်က အဲဒီလို စာကြီးပေါ်နေတယ် ကူညီပေးကြပါအုံး အခု အကောင့်ကို အသစ်ပြန်လာလည်တဲ့ အကောင့်ဟောင်းလေးတစ်ခုပါ။ ဘာမှမသိသေးလို့ ကူညီပေးကြပါအုံး။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ myatponenya2008 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by myatponenya2008
12-12-2012, 10:57 PM
Originally Posted by myatponenya2008
သီချင်း နားထောင်ချင်လို့ မဇ်စ်ပေါ့ ကိုဖွင့်တာ အကောင့်က အဲဒီလို စာကြီးပေါ်နေတယ် ကူညီပေးကြပါအုံး အခု အကောင့်ကို အသစ်ပြန်လာလည်တဲ့ အကောင့်ဟောင်းလေးတစ်ခုပါ။ ဘာမှမသိသေးလို့ ကူညီပေးကြပါအုံး။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ် mixpod site ပိတ်သွားလို့ account တွေ ၀င်မရတော့သလို playlist တွေလည်း အလုပ်မလုပ်တော့ပါဘူး။ ပြန်ဖွင့် မဖွင့်ကတော့ မသေချာပါဘူး။
playlist တွေဆုံးလို့ အော်တဲ့သူတွေ အော်နေကြလေရဲ့။ Phone application မှာတော့ Youtube လို video playlist တွေ ဖွင့်လို့ရနေသေးတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ tu tu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကေကေ2012, အောင်ဗလ, မြင့်မိုရ်, bonge, bunny, g00gle, htun30, pannuko, thethtet, yelinoo
စုမိဆောင်းမိ SystemError ဖြေရှင်းမှု့အတွက် .reg & .vbs ဖိုင်များ Myo Min Zaw ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာတိုလီမုစများ901-08-2010 03:13 PM
Flash Game နဲ့ Flash Song လေးတွေကို download လုပ်ကြရအောင် Zeiya Softwares များ 10 25-01-2010 05:00 AM
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 06:26 AM